Wednesday February 12, 2020 - 08:56:34 in Articles by Hadhwanaag News
"Buugga Dharaaraa Ina Soo Maray", Sooyaalkii iyo Sugantii SNM (1981 - 1993) ee Boobe Yuusuf Ducaale waa xog waayeel oo malaasan iyo kayd dhigaal oo macduun ah. Inta aad is la oggolaanaysaan ayaa boqol jeer ka badan inta aad isku diidi kartaan.
Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe) waxa uu ka mid yahay foolaadka, haddaanu ahayn ba, qofka ugu horreeya ee loogu hagaagi karo taariikhdii SNM. Waayo waxa uu ahaa inta badan xilligii SNM xoghayn guddi ama xoghaye fulineed, waxanu kale oo uu ahaa nin karti badan oo 'inta uu cuno ciidansha', gaar ahaan marka ay qoraal hal-abuurkii iyo kaydin dhacdo timaaddo. Waa aan xusuustaa oo lama arki jirin Boobe oo aan gacanta ku sidan xusuus-qor iyo qalin uu ku gaashaaman yahay. Sidaas buu ku noqday xogogaal wax badan og, wax badanna weeleeya, haddana soo tebinaya.
Buuggani waa buug qaro weyn, walwaalaya na xog ka culays badan dhumucdiisa. Waxa uu ka kooban yahay 474 bog. Wuu baallo fidsan yahay ballac ahaan. 98% in ka badan waa sooyaalkii iyo sugantii SNM oo car iyo bey la'. Sida uu qoraagu ba buugga meelo ka mid ah ku sharxay ereyga 'SUGANTI' oo ah wixii si rasmi ah qoraal ahaan u galay (DOCUMENT) ee SNM lahayd ayuu buuggu xambaaray.
Xog malaasan iyo kayd dhigaal ah oo macduunka ah oo aan is leeyahay buuggan mooyee meel kale oo loogu hagaagaa ma jirto ayaa noqonaysa isir Boobe loogu hibayn karo 'Billad Sharaf', marka la eego sida uu hawshaas isaga xilsaaray ee uu, ugu horrayn, u kaydiyey dhawr tobanle, mar labaadna isugu dubbaridey qoraal gelinteeda, ka dibna u soo tebiyey buug ahaanteeda dhito iyo dhaxal ahaan.
Waa dedaal naf-hur ah, waxana garan kara qof kasta oo ay buug qoraalkii is muteen, weliba buuggan oo kalena wuu ka sii xagjiraa marka lagu dhereriyo mawduuciisa iyo is diiddooyinkiisa ka dhalan kara dhaqanka hadlaaga ah ee aan daymada weyn u lahayn ama siinnin wixii 'suganti' ah, ee ka dab qaata 'kutirikuteenka' iyo 'wax la yidhi'.
Waa tee 'Sugantida' uu haddaba Boobe buuggan inoogu soo tebinayaa?
Waa dhammaan shirweyneyaashii SNM oo buuggu lix kaga tibaax bixiyey, kalfadhiyadii guddiyada iyo dhawr shir oo caadi ah iyo dhawr kale oo aan caadi ahayn. Shirarkaasi waxa ay dhacayeen muddo ku siman 10 sannadood. Shirka kasta waxa uu buuggu qorayaa sidii loo qabanqaabiyey, sidii loo maareeyey ergooyinkii ka qayb galay, taariikhdii iyo goobihii lagu qabtay, muddadii shir kastaa socdey, qodobbadii lagaga wada hadlay iyo doodihii ka dhashay iyo go'aamadii ka soo baxay.
Shir kastaa waxa uu, dhinaca kale, sawir bar-ku-joog ah ka bixinayaa xaaladdii SNM xilligaas uu shirku dhacayo ay ku sugnayd iyo joogtooyinkii kale ee xidhiidhka la lahaa. Waxa uu buuggu shirarkaas ka soo gudbinayaa ma aha qiimayn iyo aragti uu qoraagu leeyahay ee waa 'sugantii' ama 'document-kii' rasmiga ahaa ee shir kasta laga soo saaray. Waa taas ta qiimaha samaynaysaa.
Buuggu waxa uu, sidaas si la mid ah, u soo tebinayaa 'sugantii' qaab dhismeedka ururka SNM guddiyadiisa fulinta, golaha dhexe iyo guddida joogtada ah, iyo waajibkoodii xilgudasho, xeerarkii iyo xaagaantoodii (xeer hoosaadkoodii).
Waxa kale oo kuwaas raacaya oo buuggu soo bandhigayaa barnaamijkii siyaasadeed iyo dastuurradii ururkii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed (SNM) oo 'suganta' ugu macduunsan ahayd, lagana halacsan karo mabaadidii iyo waxa ay SNM u taagnayd.
Saxantii iyo dhalliishii SNM, labadu ba, iyaga oo ka badan biyaha gu'gii gala galalka Ciideed waxa laga la soo dhex bixi karaa dhawrkaas 'Suganti' ama 'Document' ee buuggu xanbaaray oo aan anigu qof ahaan u arko godanka, obocda iyo biyo-culusta buuggan.
Waxa kale oo buugga ku dhex filqan isirro kale oo SNM sooyaalkeeda u taagan oo qoraagu u doorbiday ahmiyad ay lahaayeen. Waxa ka mid ah mawduuca uu qoraagu ula baxay 'Mudantii Hawl-gallada'. Waxa uu kaga warraamayaa afar dhacdo oo waaweyn:
Kulamadii SNM iyo ergadii Garaad Cabdilqani iyo natiijooyinkii ka dhashay ayaa mawduuc kale oo buuggu wax ka taabtay ah, xiiso na leh. Kaas waxa la mid ah mawduuca kale ee muhiimka ahaa ee isna la xidhiidha heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee SNM, USC iyo SPM oo isna 'Sugantisii', 'Document-kiisii" qoraagu inagu soorayo..
Kaalinta 'dhaqanka iyo bulshada' iyo SNM waxa isu soo taagaya oo buuggu soo qaadanayaa geeddisocodkii dhismaha golaha guurtida oo SNM ka soo dhex bilaabmay 1984. Waa dhacdo soo jiidasho yeelan karta, in kasta oo aanu qoraagu inoo sheegin sababta dhismaha guurtidu uu hagaaska u galay wixii ka horreeyey 1988, isaga oo tilmaamay in 1984 dhismaha golahaas la bilaabay oo guddoomiye loo magacaabay, haddana aanu dhaqan gelin wixii ka horreeyey 1988.
Waxa aan qaybtan u arkay ta ugu liidata buuggan, wax na u dhimaysa xiisihii iyo sahii buugga lagu akhriyi lahaa. Meelo hore ayay qaybtu ka jirtaa (bogagga 157 - 186).
.2. Farta 'hayska' leh ama 'janjeedhka' leh ee 'italics' loo yaqaan oo buugga aad ugu badan oo mararka qaar dhawr bog isku wadhaysa in xal kale loo helaa ila qumman daabacadda labaad, waayo xawliga iyo xiisaha akhriska ayay yaraynaysaa, weliba dadka waaweyn, sidayda oo kale.
Maxamed Siyaad Barre haddii uu reero jiidahaas wada dega mid soo hubeeyey oo mid uu mucaaridnimo ka ururiyey ku duqeeyey saw taasiba Aaggii Waqooyi iyo Itoobiya gudaheeda kama dhici jirin oo SNM ciidanadeedu gacan ma siin jirin qabaa'ilkii taageersanaa ee qabaa'ilka kale lagu soo soofeeyey, illayn labada jeer ba "Aagga Koonfur iyo ka Waqooyi", waxa la iska difaacayaa isku mid bay ahaayeen (Xukuumaddii Maxamed Siyaad oo dagaallo beeleed xabbadda mucaaridka iskaga gudbaysa), oo beeshii SNM si uun maalin u taageerta lagu soo hubeeyey beeshii/ beelihii kale ee ay ood-wadaagta ahaayeen ee Itoobiya ama Kenya xuduudaha ku teedsanaa.
5. Gabay Qaasim lahaa oo uu qoraagu hal sadar ka soo qaatay ayaa isna u dhignaa; 'Addis Ababa gee baan lahaa ayda doogga leh'.
"Ka tag talo xume
"Waxa aannu ka nimi kuwo xanta naga qarsada, manfaca se la la wadaago,
wax se aannu u nimi kuwo labadaba naga qarsada".
Darroor oo muddo bil ku dhow aannu joogney waxa xilligaas ka furnaa saldhig ciidameed oo weyn. Maxamed Cali Faarax. AHN, ayaa joogey. Xero magaalada ka go'an oo dhinaca waqooyi galbeed kaga qumman ayuu saldhiggu ahaa. Ciidamo hubkooda fududi u dhan yahay ayaa rigli ama rasmi ku ahaa, halka meelaha kale abaabullo xooggani ka socdeen.
Magaca buugga ee "Dharaaraa Ina Soo Maray" dad badan baa ka hadlay sida uu u yaallo oo ah si aan habqoraalka toolmoon waafaqayn.
Ereyo kale oo buugga ku soo noqnoqonaya ayaa taas la mid ah sida caadiya, sharciya, dastuuriya, rasmiya iwm. Waxa loo baahnaa in ereyadaas loo qoro sidan: caadi ah, sharci ah......iwm.
Qof kasta oo doonaya in uu wax dhab ah oo aan dhalanteed ahayn ka ogaado SNM iyo waayaheedii buuggani waa uu u jidbixinayaa, sii ba wixii 'Suganti ah'. Qof kasta oo is leh SNM wax ka qorna buuggani waa u ma dhaafaan oo waxa uu u ballaqayaa albaab uu sooyaalkii SNM ka galo, una gudbinaya halkii kale ee uu doonayo in uu gaadho.
Buuggu waxa kale oo uu wax u tarayaa axsaabta siyaasadda oo ka faa'iidaysan karta sidii SNM ula falgashay dimuqraaddiyadda, xeerarka, barnaamijyada siyaasadeed, dastuurrada iyo qaabdhismeedka guddiyada iyo hannaanka shirarka.